Menzo နဲ့တွေ့မှ ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာတွေကို ကြွေမိသွားတော့တယ်… – FoodiesNavi
By yin sandi On March 12, 2018 0
အစားအသောက်မက်မောတတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂျပန်အစားအစာဆိုင်တွေတော်တော်များများကို သွားစားခဲ့ဖူးပေမယ့် ချိုချိုအီအီကြီးနဲ့ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်အရသာတွေကြောင့် ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုရင် ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အစားအစာလို့ကို သတ်မှတ်ထားခဲ့ဖူးသလို ဂျပန်အစားအစာကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလည်း ဘာကြောင့်များကြိုက်ကြတာလဲဆိုပြီး ကိုယ်တကယ်အံ့သြခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ့်ဂျပန်ရိုးရာအရသာစစ်စစ်ကို မစားဖူးလို့ဆိုတာ Menzo Ramen ဆိုင်လေးမှာ သွားစားဖူးမှပဲ ကိုယ်ယုံကြည်လက်ခံမိသွားတော့တယ်။ Menzo ဆိုင်လေးက ဒဂုံမြို့နယ် ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းမပေါ်ကနေလျှောက်သွားရင် ယောက်လမ်းနားမရောက်ခင် ဓာတ်မီးတိုင်လေးမှာ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်ညွှန်ထားပြီး အတွင်းကိုဝင်သွားရတဲ့ မြေနီထပ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းစာဆိုင်လေးဆိုတော့စစခြင်းမှာ ဆိုင်ကြီးတွေမှာတောင် ခံတွင်းမတွေ့တာနဲ့ ကိုယ်မကြိုက်အစားအစာလည်းဖြစ်တော့ သိပ်ခံတွင်းတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုပြီးထင်မိခဲ့ပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့မြည်းစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မရပ်မနားစားချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာပြီး ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာတွေကို ကြွေမိသွားတာကြောင့် Menzo ဆိုင်လေးအကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Tofu Salad ကိုစစားကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်စားဖူးနေကျလို ပေါ့ပေါ့ကြီးဖြစ်မနေဘဲ အရသာထိထိမိမိလေးကို စခံစားမိတာနဲ့ ကိုယ်နည်းနည်းသဘောကျမိသွားတယ်။ ဂျပန်တို့ဖူးအိအိစက်စက်လေးတွေကလည်း စားကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆိမ့်ဆိမ့်လေးခံစားရစေပြီး လတ်ဆတ်လှတဲ့ ဆလပ်ရွက်၊ ဂေါ်ဖီ ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို ရောပြွမ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အသီးအရွက်စိမ်းနံ့လုံးဝမခံစားရဘဲ ရေညှိဖတ်လေးတွေနဲ့ထပ်တွဲစားလိုက်တော့ ဝူး……အရွက်အသီးကြိုက်သူတွေလျှာနဲ့ တစ်သားတည်းထပ်တူညီသွားစေမယ့် လတ်ဆတ်တဲ့အရသာကို ခံစားရရှိစေမှာပါ။
Gyoza …ကတော့ ဒီဆိုင်လေးမှာကိုယ်အစွဲကြီးစွဲသွားရတဲ့ အစားအစာလေးပါပဲ။ အပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့ ဖက်ထုပ်ပုံစံလေးတွေဖြစ်ပေမယ့် စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဂျုံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ နူးညံ့တဲ့အပြင်သားတွေက ပလာတာကောင်းတစ်ချပ်စားနေရသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ပလာတာသားလို ဆီမများမအီဘဲ ကိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ ဝက်သားတွေကိုရောပေါင်းထားပြီး ထုတ်ထားတဲ့ နူးနူးအိအိအသားပေါင်းအရသာလေးကိုပါ ပေါင်းစပ်ခံစားရစေပြီး စားလို့ကိုမဝနိုင်ပါဘူး။
Torino Karaage …ကတော့ အရသာပြည့်ဝတဲ့ကြက်သားကို မုန့်နှစ်နဲ့ရောလုံးပြီးကြော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြက်သားလုံးကြော်လေးပေါ်မှာ သံပုရာရည်လေးညှစ်ပြီး မိယောနိစ်နဲ့တို့စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သံပုရာနဲ့သင်းသင်းနဲ့အတူ မိယောနိစ်ရဲ့အရသာစိမ့်စိမ့်လေးက ကြက်သားလုံးကြော်ရဲ့ အရသာထူးကဲမှုတွေ ပိုမိုအားကောင်းအောင်ပံ့ပို့ပေးစွမ်းနေပြီး ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ဂေါ်ဖီ ၊ မုန်လာဥနီဖတ်လေးတွေနဲ့ ရောဝါးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ထိထိမိမိရောပြွမ်းသွားပြီး လည်ချောင်းပြွန်ထဲကတဆင့် အစာအိမ်ထဲကို ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းစီးဝင်သွားတဲ့အရသာက ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်အောင် ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။
Mo Mo …. ကတော့ ရုတ်တရတ်ကြည့်လိုက်ရင် ဖြူဖတ်ဖြူရော်လေးနဲ့မို့ ကျက်မှကျက်သေးရဲ့လားလို့တောင် တွေးမိလိုက်သေးတယ်။ မြည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ အကင်နဲ့သင်းသင်းလေးနဲ့ အပေါ့အငန်ကွက်တိကျနေတဲ့ ထူးခြားတဲ့အရသာခံစားရစေတယ်။ ကြက်သားအသားတွေချည်းဆိုတော့ ဝါးရင်းဝါးရင်း ကုန်သွားမှာတောင်နှမြောမိတယ်။ ကိုယ်ကတော့ စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ဂျပန်ပဲငံပြာရည်လေးနဲ့ တို့တို့စားပြီး ရှယ်ကို ခံတွင်းတွေ့လာခဲ့တာပဲ။
Tsukune…..ကတော့ ဂျပန်ရိုးရာ Home-made ကြက်သားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံလေးက Mo Mo ထပ်ပိုစားကောင်းမယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့် ချိုအီအီအရသာနဲ့ မီးခိုးနံ့လိုမျိုးအနံ့ရတာကြောင့် ကိုယ်ကတော့သိပ်မကြိုက်ဘူးရယ်… တခြားလူတွေခံတွင်းနဲ့ထပ်တူကျမလားတော့မသိပေမယ့် ကိုယ့်လျှာနဲ့တော့ သိပ်ခံတွင်းမတွေ့လှဘူး။
Tonkotsu…. Ramen မျိုးစုံရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်စားခဲ့တဲ့ Ramen လေးကတော့ ဝက်သားပြားတွေနဲ့တင်ကို အရသာထူးခြားလွန်းနေပါပြီ။ နူးအိပြီးကောင်းမွန်လွန်းလှတဲ့ ဝက်သားပြားကို မြည်းကြည့်ရုံနဲ့တင် အသေခိုက်မိသွားတော့တာပဲ။ ဝက်သားတစ်မျှင်ချင်းစီမှာ အရသာပျော်ဝင်နေသလားထင်မှတ်ရလောက်အောင် လျှာဖျားမှာစွဲကျန်နေစေပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲသားကလည်း စီးပိုင်ပိုင်လေးနဲ့ အရည်ပျစ်ပျစ်လေးကို ရွှတ်ခနဲသောက်ကာ ကြွက်နားရွက်လေးကို တထုတ်ထုတ်နဲ့ကိုက်စားရတာဟာ တကယ့်ကိုလိုက်ဖက်လွန်းလှပါတယ်။ ကြက်သွန်မြိတ်အနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ကြက်ဥလေးပါ ပါသေးတာကြောင့် ဂျပန် Ramen ကြိုက်သူတွေ အသည်းခိုက်သွားမှာသေချာတဲ့ အရသာမျိုးပါ။
Chijimi ….ကတော့ Korean Pancake လို့လူသိများပြီး Nira ရွက်နဲ့ ဂျုံနဲ့ကို ပေါင်းစပ်ကြော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အရွက်ရဲ့ဆိမ့်သက်မှုတွေကို ဂျုံသားရဲ့ နူးညံ့မှုတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် အသားငါးတွေမပါဝင်ဘဲနဲ့ကို အဆိမ့်အရသာလေးတွေက ဝါးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာ အရသာခံတတ်တဲ့လျှာကို စွဲလမ်းသွားအောင် ပြုစားထားနိုင်ပါတယ်။ အသားငါးမစားသူတွေအတွက် အထူးသင့်လျော်တဲ့ အာဟာရပြည့်ဝစေမယ့် အစားအစာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Menzo ဆိုင်လေးဟာ ဂျပန်လူမျိုးတွေက လာရောက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဂျပန်လက်ရာတွေအတိုင်းချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့် ဂျပန်ရိုးရာအရသာတွေကို ထိထိမိမိခံစားရရှိစေပါတယ်။ စျေးနှုန်းက ၂၅၀၀/၃၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်လေးတွေဆိုတော့ ပေးရတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ စားရတဲ့အရသာအရမ်းကို ညီမျှလွန်းပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်ပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့အပြင်အဆင်တွေကြောင့် တစ်ခါသွားစားဖူးရုံနဲ့ ထပ်ခါတလဲလဲ ခြေဦးလှည့်မိနေမှာ အသေအချာပါပဲနော်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၁)နာရီကနေ နေ့လည်(၂)နာရီ တစ်ချိန် ၊ ညနေ(၅)နာရီခွဲကနေ ည(၁၀)နာရီထိတစ်ချိန်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Menzo ဆိုင်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ဝင်ရောက်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကပေးထားတဲ့ Menzo facebook Page မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နော်။
Menzo facebook page
In Reviews Tagged Japanese Food, Japanese Ramen Leaveacomment